theZOMI: [mrsorcerer:38100] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] For sale: Burmese virgins မြန်မာပြည်၏ ပန်းတော်ဦး ရောင်းရန်ရှိသည်
[mrsorcerer:38100] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] For sale: Burmese virgins မြန်မာပြည်၏ ပန်းတော်ဦး ရောင်းရန်ရှိသည်
Subject: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] For sale: Burmese virgins မြန်မာပြည်၏ ပန်းတော်ဦး ရောင်းရန်ရှိသည်
၁၉၈၈ သွေးမြေကျ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြီး၏ အကျိုးဆက်ရလဒ်က ဥပဒေမဲ့အခြေနေတခုလုံးဆီသို့ ဆိုက်ရောက်ခဲ့ရပြီး၊ အနာဂတ်ရှေ့ခရီးအလားလာက ကြောက်ခမန်းလိလိတုန်လှုပ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်၏။ စစ်အာဏာပိုင်များအဖို့မှာ အထွေထွေ ချွတ်ခြုံကျအောင်ဖန်တီးပေးပြီး လူတဦးခြင်း၏ အသက်ရှင်နေ ထိုင်ရေး စီးပွားဖြစ်တည်မှုဘ၀ ဘုံးဘုံးလဲကာ လှဲနေလှေအောက် မြင်းစောင်းမကျန် နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွါးရေးဆိုင်ရာ ရပိုင်ခွင့်တို့အား ပတ်သက်ဆက်နွယ်သည့် ဥပဒေအား အလုံးစုံ ပိတ်ပင် အမှောင်ချကာ အုပ်ချုပ်ကြလေ၏။
မြန်မာ စစ်အစိုးရမှ "ကိုဖန်ကန်း သဘောတူစာချုပ်" ဟုအမည်ရသော ယူအန်နှင့် ပတ်သက်သော အဖွဲ့စည်းများဖြစ်သည့် အရေးပါသော အဖွဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီစဉ် အဖွဲ့ ( ယူအန်ဒီပီ)၏ သဘောတူချက်ကို မျက်နှာလွဲခဲပစ်လုပ်ထားပုံမှာ ၁၉၈၆ ခုနှစ်က သဘောတူထားသော ကုလသမဂ္ဂ၏ "ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပတ်သက်သော အခွင်းရေး" ဆိုသည့်ကြေငြာစာတမ်းမှာ မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းခံနေရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရမှုမှ လွတ်လာပြီးနောက် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ဖိနှိပ်ချုပ်ကိုင်မှုနှင့် စီးပွါးရေး ဆိုင်ရာ အသက်ရှူမ၀ဖြစ်နေရသော အကြပ်တဲတို့ကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းရှိ လိင်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းများအတွင်းလုပ်ကိုင်နေကြသော မြန်မာပြည်မှ အမျိုးသမီးများသည် မျှတသော စီးပွါးရေးဆိုင်ရာ အခွင့်လမ်းနှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ တရားမျှတမှုတို့အား ၄င်းတို့ခံစားကြရမည်ဟု အားတက်သရော အကြီးအကျယ်မျှော်လင့်နေခဲ့ကြသည်။ သို့သော်" ကျမတို့အနေဖြင့် အခြေခံလူတန်းစားဘ၀များအတွက် ဘာတခုမှ မယ်မယ်ရရ အပြောင်းလဲအား မတွေ့သေးပဲ အပေါ်ယံ မိတ်ကပ်လိမ်းထားသော ပြောင်းလဲမှုမျိုးလောက်သာ ရှိနေသေးပါတယ်" ဟု ထိုင်းနိုင်ငံ ပြည့်တန်ဆာ
လုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်နေရသော မနု မှ ပြောဆိုပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
After Aung San Suu Kyi was freed from her arrest, most of sex workers in Thailand because of economic crisis and political suppression on woman in their homeland eagerly expect to go back to their homes and to stand on equal political and economic rights. "We do not see transparent change for grass roots and it is changing on the surface asacosmetic change", said Ma Nu who is still working inabrothel house in Thailand.
(တရုတ်နယ်စပ်မှ အကြွေပန်းများအကြောင်း စွန့်စား၇ိုက်ကူးထားသော ဓါတ်ပုံအထောက်ထားများနှင့် တိကျစွာ မကြာခင် တင်ပြပါဦးမည်) ကြိုက်သလောက်ရှယ်နိုင်ပါသည်။ စာရေးသူအားခရက်တစ်ပေးစေလိုပါသည်။
Posted By Blogger to လူဗိုလ်ဟူသည် ... at 5/01/2013 12:15:00 PM